Baarlamaanka Soomaaliya oo u yeeray Xeer Ilaaliyaha & Hanti Dhowrka Qaranka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Ilaa 12 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa gudoonka u gudbiyey qoraal ka dhan ah Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka, Axmed Cali Daahir iyo Hanti Dhowaraha Guud.
Gudoomiyaha baarlamaanka Prof. Jawaari ayaa sheegay in 12-xildhibaan oo baarlamaanka ka tirsan ay u soo gudbiyeen qoraal lagu doonayo in labadan xafiis su’aalo looga weydiiyo arrimo la xiriira howlahooda, wuxuuna xusay inay ku wargeliyeen in berri ay horyimaadaan baarlamaanka.
“Xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka oo tiradoodu tahay 12 ayaa maanta ii soo gudbiyay qoraal ay ku doonayaan inay su’aalo ku weydiiyaan xafiisyada xeer-ilaaliyaha guud ee Qaranka iyo kan Hanti-dhowrka guud, labadana berri ayaan u yeernay,” ayuu yiri Jawaari.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Jawaari ayaa sheegay in maalinta berri ay Baarlamaanka hor imaan doonaan Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka iyo Hanti dhowrka guud, si ay uga jawaabaan su’aalo laga weydiinayo mooshinka laga soo gudbiyay.
Kalfadhiga shanaad kulankiisa 16-aad ee Baarlamaanka Federaalka ah ayaa kale oo horyaalay ajande ah Akhrinta iyo ansixinta heshiiska carruurta oo uu aqbalay Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay 20-kii November sanadkii 1989-kii iyo Akhrinta labaad Hindise sharciyeedka dhismaha Guddiga Xuduudaha iyo Federaalka.